बच्चाको आमा बनिसकेकी नुसरत जहाँले भनिन्, तपाईले कसरी थाहा पाउनु भयो मेरो विवाह भएको छैन ? « Etajakhabar
एजेन्सी । अभिनेत्री नुसरत जहाँले आफ्नो हालैको फिल्म स्वस्तिक संकेत पछि एक अन्तर्वार्तामा छोरा र पार्टनर यश दासगुप्ताको बारेमा खुलासा गरेकी छिन् । छोरा यशन आएपछि आफ्नो जीवनमा सबै परिवर्तन भएको अभिनेत्रीले बताइन् । आफ्ना पूर्व पति निखिल जैनसँगको सबै स म्ब न्ध तोडेपछि उनी अब अभिनेता यश दासगुप्ता संग बछिन् । यस निर्णयको बारेमा कुरा गर्दै नुसरतले आफ्नो निर्णयमा निकै गर्व लागेको बताइन् । उनी आफूलाई आजको युगको साहसी केटी ठान्छन् ।
अहिले आफ्नो काम र घरमा समय बाँडिएको उनले बताइन् । यस क्रममा उनले मजाक गर्दै यो पनि भनिन् कि कहिलेकाहीँ मलाई धेरै ढिलो हुन्छ, जसको लागि उनी यशनप्रति आभारी छिन्। अन्तर्वार्तामा नायिकाले भनिन्, ‘पहिले समयमै आउँछु भनेर मानिसलाइ भन्थे । तर अहिले जब उनी कामको लागि घरबाट निस्कन्छिन्, कसैले आशाका आँखाले हेर्छन् । नुसरतले भनिन्, ‘यसलाई समय दिएर आउनु पर्ने भएकाले धेरै पटक काममा पुग्न ढिलो हुन्छ ।
उनले भनिन् कि मलाई विश्वास छ आमा बनेपछि सबैको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ । अभिनेत्रीले सुरुमा आफ्नो बच्चाको बुबाको नाम नखुलाउने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, पछि उपयुक्त समय आएपछि उनले यो कुरा सबैसामु खुलासा गरीन् । आफ्नो निर्णयबारे उनले भारतका केही कानुनअनुसार केही प्रश्नको जवाफ दिने अधिकार नरहेको बताए ।
नुसरत जहाँ र यश दासगुप्ताले अहिले आफ्नो स म्ब न्ध को बारेमा खुलेर कुरा गर्न थालेका छन् । विकिपिडियामा यश दासगुप्तालाई घरेलु साझेदारको रूपमा वर्णन गर्दै नुसरत जहाँले यो बिल्कुल सत्य हो र म यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्न भनिन्। आखिर यसले मलाई किन सताउने ? हामी एक परिवार हौं। यसै क्रममा बिहेको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनले हाँसे र बिहेको पार्टमा नजाऔं भने । मैले बिहे नगरेको कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?
विगत केही वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेका प्रश्नहरूमा नुसरतले भनिन्, ‘म सधैं बलियो केटी हुँ । राम्रो वा नराम्रो, सहि वा गलत भन्ने निर्णय मैले सधैं आफैंले गरेको छु। त्यसैले म सधैं आफ्नो कार्यको लागि जिम्मेवार छु।
वर्कफ्रन्टको कुरा गर्ने हो भने नुसरत हालै फिल्म ‘स्वस्तिक संकेत’ मा देखिएकी थिइन् । यस फिल्ममा उनीसँगै शाश्वत चट्टोपाध्याय पनि देखिएका थिए । चलचित्रको बारेमा कुरा गर्दै अभिनेत्रीले आफू पेशाले बैंकर र जोशले क्रिप्टोग्राफर र लेखक भएकी सामान्य बंगाली युवती रुद्राणीको भूमिका निभाइरहेको बताइन् ।